Ahoana no ampiofanana ny feon'ny fieritreretanao - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Ahoana ny fampiofanana ny feon'ny fieritreretanareo?
Misy zaza maniry "biscuit" iray fa miodina amin'ny tavoahangy mofomamy. Mahatsiaro ny zava-niseho farany teo ka tsy naka «Guetzli». Tonga any an-trano dimy taona talohan'ny fotoana voatondro ny tovovavy iray, satria tsy te hangatahina ny fahatongavan'ny fahatongavany. Ny mpiantoka ny hetra dia miantoka fa mitatitra ny vola azony izy ireo satria tsy te handoa onitra izy ireo rehefa dinihina ny fiverenan'ny hetra. Ny tahotra ny sazy dia manakana ny olona maro tsy hanao ratsy.
Amin’ny Romana 2,14-17 Miresaka momba ny Jiosy sy ny Jentilisa sy ny fifandraisany amin’ny lalàna i Paoly. Notarihin’ny lalàn’i Mosesy ny Jiosy, fa ny jentilisa sasany izay tsy nanana ny lalàna dia nanao araka ny tokony ho izy ny zavatra takin’ny lalàna. "Tamin'izay nataony dia lalàna ho an'ny tenany izy ireo".
Nanao zavatra araka ny feon’ny fieritreretany izy ireo. I Frank E. Gaebelein ao amin’ny The Expositor’s Bible Commentary dia miantso ny feon’ny fieritreretana ho “fanaraha-maso nomen’Andriamanitra.” Tena zava-dehibe izany satria tsy misy feon’ny fieritreretana na mpanara-maso, dia ho toy ny biby isika. fahalalana ny tsara na ny ratsy.
Toa tsy mampiasa fanamelohana ho "mpampianatra" ny ray aman-dreny sasany ankehitriny. «Tsy ara-politika izany. Ny faharatsiana dia tsy mahasalama. Manimba ny fitiavan-tena ataon'ilay zaza ». Marina fa mety hanimba ny karazana fahadisoana diso. Saingy ny fanitsiana tsara, ny fampianarana ny tsara sy ny tsy mety ary ny fanenina dia mila zaza ho lasa olon-dehibe. Ny kolontsaina tsirairay eto amin'izao tontolo izao dia manana karazana mety sy diso ary mampiditra sazy amin'ny fanitsakitsahana ny lalàn'ny fireneny. Mampalahelo, mampalahelo mihitsy aza, ny mahita hoe firy no very ny fahafantarana ny tsy fivadiham-po sy ny feon'ny fieritreretana.